Indlu enendawo yokuphola yonke sinombuki zindwendwe onguDimitris
Ngaphezulu nje kolwandle oludumileyo lweSuper Paradise, kukho indawo yabucala ye-Super Paradise Villas eneendawo ezintathu zokuhlala. Eyokuqala, inequla layo elingapheliyo elinombono ococekileyo woLwandle lwe-Aegean kunye ne-spa eyakhelwe-ngaphakathi, indawo yokungena eyahlukileyo kunye nendawo yabucala yangaphandle apho kukho itafile enkulu yokutyela, i-BBQ, ibha enkulu kunye nenkqubo yesandi sobugcisa. . Kwindawo yegumbi lokutyela elakhiwe ngamatye elijikelezwe ngamatye amakhulu, amanyathelo nje ambalwa ukusuka echibini kunye nekhitshi, ungakonwabela ukutya okumnandi, ukutya okukhawulezayo kunye nokuhlaziya imini yonke kwaye uphumle nabahlobo bakho nincokola okanye isiselo ebusuku. Ingaphakathi leSuperOne lenziwe nge-ergonomically kunye nesitayile sale mihla kunye nokuhombisa. Kumgangatho ophezulu kukho ikhitshi elixhotyiswe ngokupheleleyo kunye negumbi lokutyela eliphambili kunye negumbi lokuhlala elinombono we-infinity blue. Umgangatho omnye usezantsi kulele amagumbi okulala amahlanu, ngalinye lineebhedi ezimbini ezingamawele okanye ibhedi ephindwe kabini, igumbi lokuhlambela le-en-suite, kunye nokufikelela ngokuthe ngqo kwi-terrace.
Zonke iipropathi zeSuper Paradise Villas complex zilungele iqela elikhulu labahlobo okanye iintsapho ezinqwenela ukuchitha iholide yazo kunye kwindawo emnandi nekhuselekileyo. Imfihlo ezinikezelwa kuyo yonke i-semi-detached, ikwacetyiswa kumaqela amancinci okanye iintsapho ezifuna indawo enobuhlobo kunye nekhululekileyo kwindawo entle.
I-villa ilungele imisitho yomtshato, amatheko omhla wokuzalwa okanye naluphi na uhlobo lomsitho ofuna ukuwenza kwisiqithi saseMykonos.
Singabonelela ngomcwangcisi womtshato kunye nazo zonke iinkonzo ze-concierge onokuthi uzifune ukulungiselela iiholide zakho, njengokuhamba ngesikhephe, umpheki wesidlo sangasese sangasese, isidlo sasemini okanye isidlo sakusasa, ukudluliselwa kwabucala njl.
Inombolo yomthetho: 1173K91000985901
Idiphozithi Yokhuseleko - ukuba wenza umonakalo kwikhaya, usenokubhataliswa ukuya kutsho kwi-$791
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Mykonos